50 tusaalooyin oo ah origami wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
Origami, sida ku xusan wikipedia:
El origami (origami?) waa tahay asal ahaan japanese ee isku laaban ee papel, si loo helo tirooyin qaabab kala duwan leh. Isbaanishka waxaa sidoo kale loo yaqaan 'origami' ama wadnaha.
Origami ahaan, maqas ama xabag ama majarafado looma isticmaalo, kaliya warqad iyo gacmo. Sidaa darteed, oo leh xaashiyo yar oo xaashi ah, meydadka joomatari oo kala duwan ayaa la heli karaa (mararka qaarkood xitaa polyhedra) ama tirooyin la mid ah xaqiiqda. Tirooyinka kala duwan ee laga helay warqad waxay yeelan karaan aagag kala duwan (waxay kuxirantahay qaybta warqadda ee mid kale ka hooseysa) iyo dhowr mug.
Markaan tan akhriyo, waxaan u maleynayaa in qof walbaa horeyba u lahaa fikrad ah waxa asalka ah ee cadahay, waxaana kaliya oo aan ilaalin karnaa 50-ka tusaalooyin ee cajiibka ah ee harsan kadib boodada farshaxankan. Gacmaha iyo warqadda, wax kale ma jiraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 50 tusaalooyin oo ah origami aad u fiican
Ku jawaab famb
Aad u fiican…. Hambalyo shaqo aad u wanaagsan.